Manatsara ny naoty fanombanana ny fiarovana an'i Costa Rica ny FAA
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Manatsara ny naoty fanombanana ny fiarovana an'i Costa Rica ny FAA
Febroary 12, 2021
Ny fanambarana ny sokajy 1 anio dia mifototra amin'ny fanombanana indray amin'ny taona 2020 sy ny fivoriana fanaraha-maso ny fiarovana ny Janoary 2021 miaraka amin'ny Direktorat jeneralin'ny fiaramanidina sivily (DGAC)
Nanambara ny FAA fa manaraka ny fenitra fiarovana iraisam-pirenena ny Repoblikan'i Costa Rica
Nahazo ny laharana iraisam-pirenena avo indrindra i Costa Rica
Costa Rica dia nahazo naoty sokajy 2 tamin'ny Mey 2019 taorian'ny tsy fanarahana ny fenitry ny fiarovana ny ICAO
The Departemantan'ny fitaterana an-tany (DOT) amerikana Federal Aviation Administration (FAA) dia nanambara androany fa ny Repoblikan'i Costa Rica dia manaraka ny fenitra fiarovana iraisam-pirenena ary nomena ny laharana iraisam-pirenena avo indrindra.
The faa Ny fanombanana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny sidina (IASA) dia mifantoka amin'ny fahafahan'ny firenena manaraka ny fenitry ny fiarovana ny sidina iraisam-pirenena sy ny fomba fanao natolotra. Ny fenitra dia mihatra amin'ny mpandamina ary apetraky ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny sidina sivily (ICAO), masoivoho teknikan'ny Firenena Mikambana ho an'ny fiaramanidina.
"Midera ny Direktorat jeneralin'ny fiaramanidina sivily an'ny Repoblikan'i Costa Rica izahay fa naneho ny fahavononany hiandraikitra ny fiarovana ny rafitra fiaramanidina Costa Rica," hoy ny Administrator an'ny FAA, Steve Dickson.
Costa Rica dia nahazo naoty sokajy 2 tamin'ny Mey 2019 taorian'ny tsy fanarahana ny fenitry ny fiarovana ny ICAO. Ny naotin'ny sokajy 2 IASA dia midika fa ny firenena dia tsy misy lalàna na lalàna ilaina hanaraha-maso ireo mpitatitra fiaramanidina mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena farafahakeliny momba ny raharaha fiarovana, toy ny fahaizana teknika, mpiasa voaofana, fitahirizana firaketana, na fomba fizahana. Ny laharana faha-2 dia mamela ny mpitatitra avy amin'ny firenena iray manokana hanohy hanome serivisy efa misy any Etazonia, saingy tsy avela mametraka làlana vaovao.
Ny fanambarana ny sokajy 1 androany dia mifototra amin'ny fanombanana indray amin'ny taona 2020 sy ny fivoriana fanaraha-maso ny fiarovana ny volana Janoary 2021 miaraka amin'ny Direktorat jeneralin'ny fiaramanidina sivily (DGAC). Ny isa na sokajy 1 dia midika fa manaraka ny fenitry ny ICAO ny fahefan'ny fiaramanidina sivily ao amin'ny firenena. Eo ambanin'ny sokajy 1, mahazo alalana hanompo any Etazonia ny mpitatitra fiaramanidina Costa Rican manana alalana araka ny tokony ho izy ary tsy misy fetra.
Amin'ny alàlan'ny IASA, ny FAA dia manombatombana ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily amin'ny firenena rehetra izay ny fiaramanidina mitondra fiaramanidina na nangataka ny hisidina any Etazonia, amin'izao fotoana izao dia manao hetsika any Etazonia, na mandray anjara amin'ny fizarana kaody miaraka amin'ireo zotram-piaramanidina mpiara-miasa amerikana ary manome izany fampahalalana izany ho an'ny besinimaro. Ny fanombanana dia mifototra amin'ny fenitry ny fiarovana ICAO.
Miantso azy ny Air Namibia
Ny haba amin'ny divay tsy misy solontena avy amin'ny fizahan-tany na mpizahatany
Tsy misy drafitra vonjy maika: ATCEUC dia namoaka snapshot momba ny fitantanana ny fifamoivoizana an'habakabaka any Eropa
5 ora lasa izay
Ny laboratoara fanandramana COVID-24 vaovao 7/19 ao Seychelles dia manome safidy maro ho an'ny mpandeha
Vaovao momba ny dia any Japon
Horohoron-tany lehibe roa tany Japon, tsy nisy tsunami
Nahemotra ny Cee Platform Investment Hotel sy Caucasus HOTCO 2021
Mankalaza ireo mpivarotra dia miaraka amin'ny antoko virtoaly ao amin'ny “Da Backyard” i Bahamas
Vondrona LATAM: fako zezika hatrany amin'ny 2027 ary tsy miandany amin'ny 2050 ny karbaona
Vaovao momba ny dia Oganda
Mampitsahatra ny diany ho any India i Uganda